Posted by မသက်ဇင် at 9:07 AM
အစ်မဆိုတာအောက်မေ့လို့ ။ အမကိုယ်တိုင်တစ်ပုဒ်လောက်ဆိုပြပါဦးဗျာ ။
တကယ် ကောင်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ငယ်ချစ်ဟောင်းကို သတိရဖွယ်ရာပါပဲ...။ အဖြစ်ဟောင်းဆိုတာ လူတိုင်းကိုယ်ဆီ ရှိကြလေပြီ...။ စောင်းကြိုးတွေလည်း ပြတ်ရှာလေပြီ...။
ကိုယ်တိုင်ဆိုတာများလားလို့ .. လာအားပေးတာ
မင်္ဂလာပါ (မ)သက်ဇင် ၊၊ ဒီသီချင်းတွေနားမထောင်ဖြစ်တာ အတော်တောင်ကြာပီ ပဲ ၊၊ ကောင်းမွန်ပါတယ်ဗျာ ၊၊
ကိုယ်ပဲ ကန်းနေတာလားတော့မသိဘူး ..
အစ်မကို ကျွန်မ online မှာ တွေ့ပေမဲ့
Red Light ပြထားရင် မခေါ်တော့ဘူးနော် အစ်မ ..
ကျွန်မက SG time 7:00 - 10:00 ကို အမြဲ online မှာ ပုန်းနေတာအစ်မ .. မတွေ့လဲ message ပို့လိုက် .. ရတယ် အစ်မ ... နော်
အစ်မရေ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါနော် အမ ကိုယ်တိုင်ဆိုတာလားလို့ လာအားပေးသွားတယ် အစ်မရေ အဆင်ပြေပါစေအစ်မ။
အမ ဆိုတာမှတ်လို့.. အမရဲ့......
ဟီး.. ဆောင်းဝင်တီးသွားတယ်... :)
...စောင်းသံ မပီ တေးလည်းမညီလေပြီ
ရည်၇ွယ်လှမ်းရာ လမ်းရှာသူ အဖြစ်များသည်
စောင်းသံလေး လာနားထောင်သွားပါတယ်..း)
သီချင်းနဲ့ အပေါ်က ရှုခင်းက သိပ်ကို လိုက်ဖက်တယ်။ ဒီသီချင်းလေးကို ဒီဘလော့ဂ်ရှုခင်း မပြောင်းမချင်း ထည့်ထားသင့်တယ်။ ဒီလို သီချင်းအေးအေးတွေကို သိပ်ကြိုက်တယ်။
အပြေးအလွှားဖွင့် အော်.. သီချင်းဖြစ်နေပါ့ပဲ။
သိဘူးလေ မသက်ဇင်ရဲ့ ဝတ္ထုဖတ်ဟန်ကို ရုပ်ရှင်လုပ်ပြီး တင်ထားတယ်ထင်တာ။
ငယ်ချစ်ဟောင်းကို လွမ်းနေပြီလား :D
အဟဲ.. ဟုတ်ပ .. မသက်ဇင် ဆိုတယ်မှတ်လို့...
အမ ရေးတာတွေနဲ့လည်း လိုက်တယ်လို့ထင်ရတယ် .. အိမ်ပြောင်းပြီးမှ မရောက်ဖြစ်ဘူး ...
အခုပိုပြီးတော့ ကြက်သရေရှိသွားတယ်ဗျာ ..
သီချင်းလေး ကြည့်ရှုနားဆင်ခံစား သွားပါတယ် မသက်ဇင်..။
အဟီး.. အဆိုပိုင်လှချည်လားမှတ်တယ်.. :D
တီတီဇင်ရေ.. ဒီသီချင်းလေး ကြားရတာ ရန်ကုန်အိမ်ကို သတိရတယ်... အိမ်ဘေးအိမ်က သူတွေက ဒီသီချင်းကို ပဲ နေ့တိုင်း ညတိုင်းဖွင့်တာ ခဏခဏဖွင့်တယ်.. ဒီသီချင်းကိုပဲ ကျော့းနေအောင် ထပ်နေအောင်ဖွင့်တေ့ာ အစက မကြိုက်ခဲ့ဘူး ... သူတို့ ဖွင့်ပါများလာတော့ အ၇မ်းကြိုက်သွားတာ...
အခုလို ပြန်နားထောင်ရတော့ ရင်ထဲမှာ လည်း တမျိုးကြီးပဲ.... စာသားလေးတွေကလည်း ထိတယ်.... အဆိုတော် အန်တီသန့် ကလည်း အသံ အရမ်းကောင်းတယ်.. မေမေနဲ့ ငယ်ငယ်ကဆို အန့်တီသန့် ဆို့ဆီ ခဏခဏ သွားလည်ရင် အန်တီသန့် အဆိုကျင့်ကျင့် နေတာကို တောင် သတိရသွားတယ်....
နားဆင်လို့ကောင်းပါတယ်.. တီတီဇင်ရေ.. အခုလို တင်ပေးတာ ကျေးဇူး...
နည်းနည်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့ မလားဖြစ်တာ၊ ဒါ ပထမဆုံး ပြန်တက်လာရင်း... လာဖတ်တာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...အစ်မရေ... လာဖတ်ခွင့်ရလို့
သမိုင်းကြောင်းတွေရေးထားတာတွေ့ လို့ 
ကျနော် လင်ခ့်ထားချင်တယ် အမ..
အမခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် တော့ နောက်တစ်ခါစာလာဖတ်ရင်းနဲ့ 
အမရေ အလည်လာရောက် နားဆင်သွားပါတယ်ဗျ။
စိတ်တူကိုယ်တူ အနုပညာမြတ်နိုး...ဆိုတဲ့အပိုဒ် တော်တော်ခိုက်တယ်ဗျာ။
Thanks for your sharing. Also appreciated for runningaquality blog for us.
12:09 AM PST
:D အနုပညာ ဓာတ်ခံလေး နဲနဲပါးပါး ရှိပေမယ့် ဟိုစောင်းကြီးနဲ့ မျက်နှာမဲ့မဲ့ကြီး ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတိုင်း ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ရယ်ချင်နေမိတယ် မသိဘူး။ တော်တော် သရုပ်ဆောင် ကောင်းတယ်လို့ ပြောရမလားမသိ။ စောင်းကြီးပိုက်ပြီး လျှောက်သွားနေသေးတယ်။ ဟားဟား။
မရှိတဲ့ ငယ်ချစ်ဟောင်းကိုတောင် လွမ်းသွားတယ် ။ :D
နှစ်သက်ဖွယ် သီချင်းကောင်း တစ်ပုဒ် နားဆက်ရလို့ကျေးဇူးပါ အစ်မ ။ :)
ဧကန္တ အစ်မလည်း ငယ်ချစ်ဟောင်းကို လွမ်းနေပြီ ထင်တယ် ။ :P
အဟုတ်ပါ အမရယ်။ သီချင်းဟောင်းလေးကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူကြီး ပေါ်ပေါ်လာတိုင်း ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူး ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ။ ဒါရိုက်တာ ဝင်းထွန်းထွန်း ရုပ်နဲ့လည်း တူသေးတယ်။ :D
3:35 AM PST
အနုပညာ စစ်စစ်လေးတွေ ခံစားရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ...
အစ်မရေးနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့တော့ ကွက်တိပဲ ..
တစ်ခါမှ နားမထောင်ဖူးဘူး ဒါ ပထမဆုံးပဲ ...
4:32 AM PST
သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို နားဆင်လို့ ကြည်နူးသွားပါ၏
အဆင်ပြေမယ်ဆို idulize@gmail.com ကို အက်ပေးစေချင်ပါတယ် အစ်မ ..။
အမရေ .. ခင်မင်စွာဖြင့် လာလည်သွားပါတယ် .. သီချင်းလည်းနားထောင်ရင်းပေါ့ .. နားမထောင်ဘူးတာသေချာပါတယ် ..း) ညီမဆီ လာလည်သွားလို့လည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ခင်မင်ခွင့် ရချင်ပါတယ် ..း)
ဒီသီချင်းကို တော်တော် ကြိုက်ပါတယ်..ဆိုလည်းဆိုဖူးပါတယ် မသက်ဇင်..ကျေးဇူးပါဗျာ..
အလည်လာသွားပါတယ်.. စီဘောက်စ်မတွေ့လို့ ဒီမှာ နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်နော်...
I love this SONG and i can see PAGAN VIEWS from myanmar.Thanks amillion for your hardworks dear. You are the best and I will always be in your website.
မမဆိုတာလားလို့... မမ ဆိုပြဦးလေ..